गणतन्त्र संकटमा पर्‍यो भन्दै सरकार जनतालाई त्रसित पार्दैछ : पूर्वसभामुख रानाभाट [भिडियो वार्ता]
नेपाल लाइभ बुधबार, भदौ २५, २०७६, ०९:५५
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचार गर्न सिंगापुर जानुअघि गरेको सर्वदलीय बैठकमा राखेका धारणाप्रति पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले आफ्नो कमजोरी छोप्न विभिन्न बहाना बनाउने गरेको रानाभाटको तर्क छ। रानाभाटले सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्न मुलुकमा संकट उत्पन्न हुन थालेको भ्रम सृजना गरेको दाबी गरे।
नेपाल लाइभको कार्यक्रम 'समय संवाद'का लागि पुष्षा केसीसँग कुरा गर्दै उनले जनताका आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने कामतिर ध्यान नदिएर व्यक्ति, समूह र पार्टीका लागि काम हुन थालेको आरोप लगाए। जसका कारण जनतामा बढेको असन्तुष्टि अन्यत्र मोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता विषय उठाउने गरेको उनको भनाइ छ।
उनले मुलुकप्रति सरकारमा बच्पना देखाएको पनि आरोप लगाए। आफू जननिर्वाचित प्रतिनिधि भन्ने गम्भीर्य सरकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्युले दुई वटा कुरा भन्नुभयो। अहो ! मुलुकमा भयावह स्थिति आउन लाग्यो। एकातिर राजा, अर्कातिर विप्लव। दुई तत्वले अराजकता निम्त्याउने भए। संवैधानिक व्यवस्थाप्रति खतरा उत्पन्न भएको छ, त्यसका लागि हामी सब मिल्नुपर्‍यो,’ रानाभाटले भने, ‘जनतालाई किन त्राहिमाम बनाएको? जबकि सतहमा सरकारले भने अनुसार देखिँदैन। राजा र विप्लवले राजनीतिक उथलपुथल ल्याउने गरी व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न गराउने गरी गतिविधि गरेको पनि देखिँदैन। यो मुलुकका लागि थ्रेट त होइन। तर, किन थ्रेट बनाएको?’
जनताप्रति सरकार उत्तरदायी भएन भने संसदले सरकारविरुद्ध कुनै पनि कदम चाल्न सक्छ भन्ने डर हराउँदा नै अहिलेको स्थिति देखिएको रानाभाटले बताएका छन्।
पूरा अन्तर्वार्ता यो भिडियोमा हेर्न सकिनेछ-